क्वारेन्टाइनमा राखिएका एक व्यक्तिले गरे आत्महत्या - Manaslu Post
मनास्लु पाेष्ट १८ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०८:२७ 185 पटक हेरिएको
गुल्मी । गुल्मीको क्वारेन्टाइनमा राखिएका एक व्यक्तिले आत्महत्या गरेका छन् । छत्रकोट गाउँपालिका–४ का ५६ वर्षीय चन्द्रबहादुर परियारले झुण्डिएर आत्महत्या गरेका हुन् ।
उनी शनिबार मात्रै भारतबाट आएका थिए । उनलाई आदर्श माविको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो ।
छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष डिलाराम न्यौपानेका अनुसार क्वारेन्टाइनभन्दा दुई सय मिटर टाढाको रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा परियारको शव फेला परेको थियो । सो क्वारेन्टाइनमा ३० जनालाई राखिएको थियो ।
वडाअध्यक्ष न्यौपानेले घटनाबारे दिएको जानकारी यस्तो छ–
शनिबार क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरुको स्वास्थ्यकर्मीहरुले स्वास्थ्य जाँच गरिरहेका थिए । हामी व्यस्त थियौं । शनिबार साँझ करिब साढे ६ बजेतिर शौचालय जान्छु भनेर कोठाबाट निस्किनु भएछ ।
स्वास्थ्य जाँच्दै जाने क्रममा एक जना मान्छे खै ? शौचालय गएको चन्द्रबहादुर खै ? भनेर खोजी सुरु भयो । क्वारेन्टाइनमा नभेटिएपछि भागेको थाहा भयो । वरपर खोज्दै जाँदा स्कुलभन्दा करिब दुई सय मिटर टाढा रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा भेटियो । करिब एक घण्टाको बीचमा हामीले शव फेला पार्यौं ।
आत्महत्या गर्नुको कारण थाहा छैन । प्रहरीले मुचुल्का उठाएर अनुसन्धान जारी राखेको छ ।
भारतीय सिरियलमा निरिशाको तीन
निर्मला हत्याकाण्डमा मुद्दा लागेका
आफ्नै छोरी र आमालाई